Mgbasa igwe ndọkụrịta gụnyere ọtụtụ ụdị. Onye ọ bụla nwere ụkpụrụ ọrụ dị iche iche yana ihe eji eme ihe mana mana enwere otu ihe: mmekọrịta dị n'etiti ndọta na elektrọn na -eme ka elektrọnị na -agba gburugburu gburugburu ebe elekwasịrị anya, si otú a na -abawanye ohere nke elektrọn na -akụ gas argon iji mepụta ions..Ọdụ ndị emepụtara na -emekọ na elu ebumnuche n'okpuru ọrụ nke ọkụ eletrik iji gbasaa ebumnuche na -agbasa., onye ọ bụla ejirila nwayọ na -anabata ndọta na -adịgide adịgide, na adịkarịghị eji eriri igwe..
Ụkpụrụ nke ịgbasa ugboro ugboro bụ otu ihe ahụ n'ozuzu DC ịgbasa. Ihe dị iche bụ na DC sputtering na -eji gbọmgbọm ahụ dị ka anode, mgbe etiti ugboro sputtering na -abụọ. A ga -ekpebi ma ọ bụrụ na gbọmgbọm ahụ ga -esonye ga -ekpebi site na mkpokọta ya, na usoro niile n'oge usoro ịgba mmiri, nhazi nke anode na cathode nwere njikọ. Enwere ọtụtụ ụzọ isonye na okirikiri oke. Ụzọ dị iche iche nwere ike nweta mkpụrụ osisi dị iche iche dị iche iche na njupụta ion dị iche iche..
Teknụzụ kachasị nke ịgbasa ugboro ugboro dị na imewe na itinye ọkụ. Ugbu a, ụzọ mmepụta ndị ka tozuru etozu bụ ebili mmiri na ebili mmiri. Onye ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Mbụ, tụlee ụdị akwa ihe nkiri wee nyochaa nke ụzọ mmepụta ike dabara maka ya. Ihe nkiri, ị nwere ike iji njirimara ike ọkọnọ wee nweta mmetụta ihe nkiri chọrọ.
A na -eji ebumnuche ahụ maka ebumnuche ugboro ugboro, na ụfọdụ ebumnuche na -agbagharị agbagharị na -eji ụzọ abụọ. Banyere ugboro ole etiti, a na -eji ụfọdụ ọla arụ ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ, nke nwere ike idobe ọtụtụ akụkụ ọrụ, na ihe nkiri plated ahụ dịkwa okirikiri..
Prev: Ọhụrụ ụdị titanium-aluminum alloy lekwasịrị n'ichepụta usoro
Next: Isi nke ebumnuche ITO